Hehy · Aogositra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Aogositra, 2010
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Aogositra, 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Aogositra 2010
Azia Atsinanana 16 Aogositra 2010
Voalohany indrindra, inona moa Jejemon? Izany dia fanambàrana manokana ny fomba fiteny amin'ny aterineto sy ny finday izay malaza loatra ampiasaina eo anivon'ireo tanora Filipiana ankehitriny. Ireo tompon'andraikitry ny Fanabeazana dia tsy faly amin'ity hadalàn'ny Jejemon ity satria mino izy ireo fa manaratsy ny fahaizan'ireo mpianatra ny tenim-pirenena izany. Volana...
Maneran-tany: Kisarisarin'ny Ramadany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Aogositra 2010
Isan-taona, ireo silamo mpampiasa tranonkala maneran-tany dia mifampizara sary ho fankalazany ny Ramadany. Raha manetriketrika ny ankamaroan'ireo sary ireo, tahaka ny iray etsy ankavia, matetika dia feno hatsikana mivezivezy koa any, hoy ny voasoratr'i Jillian C. York, izay nizara sombintsombiny tamin'ity fifaliana ity.
Azia Atsinanana 10 Aogositra 2010